Shiinaha warshad miisaanka dumbbell miisaanka hagaajin iyo alaab-qeybiyeyaasha | Yunlingyu
keydka miisaanka dumbbell ee la hagaajin karo
Xeerka alaabta: YLY-JZT001
Meesha qalabka: 90 darajo xagal la hagaajin karo
Cabbirka badeecada: 1280 * 510 * 255 mm
Dhibcaha Feejignaanta Jimicsiga
1.Markay muruqyadu daalan yihiin oo barbarkuna uu culus yahay, Hubso in garbahaaga iyo gacmahaagu ay xakameynayaan qaanso-baxa intaadan qaadin. Ka fogow inaad xoog badan isticmaasho markii aad kor u qaadayso xarkaha madaxaaga kor ilaa garkaaga. Si aad u badan oo ay si toos ah uga sarreyso garka. Cududdu waxay ku taal xagal xaggeeda mana xakamayn karto baarka si wax ku ool ah. Haddii aysan jirin wax difaac ah, way fududahay in barbaraha horay loo sii wado inuu shil dhaliyo.
2. Riix baarka ka baxsan halka laga gaaro xoogga, Dhexda iyo dhabarka ayaa aad u adag in la taageero, si looga fogaado murqaha murgacashada.
Qodobbada lagu xuso iibsashada
1.Qabdhismeedka iyo wax soo saarka miisaanka keydku waa kuwa ugu muhiimsan, waa inaan hubinno xoog iyo xasilooni. Kuraasta qaar waxay leeyihiin shaqooyin badan, laakiin aad ayey u gariiraan isticmaalka.
2.Dhererka saxaro raaxo leh waa inuu ahaadaa mid sax ah, si loo hubiyo inaad sameysid kursiga keydka, ma dareemi doontid inuu aad u sareeyo, ma sameyn doontid dumbbells, ma dareemi doono wax aad u hooseeya, guud ahaan marka la hadlo, qiyaastii 50 cm dhererkeedu waa ku habboon yahay, dusha saxaraduna waa inay dheer ku filan, haddii kale waa inaad ku dhejisaa dhexda hoosteeda, waa wax aan fiicnayn.
3. Ha ku daba-galin hawlo badan, laakiin waxaan kugula talinayaa inaad iibsato kursiga la isku-hagaajin karo, dhabarka dambe ee dhabarka ayaa loo habeyn karaa xagal 30 ah una dhow Xagasha toosan, si aad u fuliso kursiga keydka riixitaanka iyo dumbbell riix, fiiro gaar ah u yeelo qaybta kursiga sidoo kale waa la hagaajin karaa, samee riixitaan hoose, waxay u baahan tahay inay janjeerto, haddii kale way sii socon doontaa.
Magaca badeecada keydka miisaanka dumbbell ee la hagaajin karo
wax Bir / Bir iyo Mat PU
miisaanka miisaanka saafiga: 38kg
miisaanka gors: 40kg
midab Madow ama Lahabeyn karo
nooca kursiga miisaanka
kale oo xambaarsan 300kg
90 darajo xagal la hagaajin karo
Cabbirka baakadka 1500 * 600 * 1400 mm
Hore: Kursiga miisaanka miisaanka badan ee shaqeynaya
Xiga: Guddiga tababarka Bicep
Suxuunta Bench Press